प्रशासनद्वारा विद्युतीय रिक्सा बन्द – YesKathmandu.com
प्रशासनद्वारा विद्युतीय रिक्सा बन्द
शनिबार १८, भदौ २०७३
बागलुङ । अनाधिकृत रुपमा चलेका विद्युतीय रिक्सालाई स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको छ । तीन महिनादेखि कागजातबिना चौध विद्युतीय रिक्सा बागलुङ बजारमा सञ्चालित थिए ।
‘रुट परमिट’, दर्ता र चालक अनुमतिपत्र समेत नभएपछि रिक्सा बन्द गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्युतीय रिक्सा चलाउन अन्य सवारी साधनको जस्तै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रिक्साले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिए पनि अनाधिकृत रुपमा चलेकाले बन्द गराउनुपरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रहरी निरीक्षक कुलबहादुर हरिजनले बताए।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएमा रिक्सालाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिइने उनको भनाइ छ । बागलुङ कालिकाभगवती यातायात प्रालिले सुरुमा तीन वटा विद्युतीय रिक्सा बागलुङमा ल्याएको थियो । पछि राम्रो चल्ने र आम्दानी पनि हुने देखेर अन्य व्यवसायीले रिक्सा खरिद गरेर सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
रिक्सा धनीले भने आफ्नो दैनिक रोजीरोटीको बाटो बन्द भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बागलुङमा विगत साढे दुई वर्षदेखि चालक अनुमतिपत्र वितरण रोकिएपछि नयाँ चालक मर्कामा परेका छन् ।
विद्युतीय रिक्सा लगायतका कुनै पनि सवारी साधानको चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको छैन ।
पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण देखाउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले चालक अनुमतिपत्र वितरण रोकेको छ । रासस
ठ्याक्कै राजेश हमाल : झुक्किनुहोला ! यिनी हुन शीतल पोखरेल
प्रधानमन्त्री कार्यलयमा के गर्न आए यि जोगी ?
काग्रेसलाई राष्ट्रविरोधी भन्नेहरु भोली पछुताउने छन
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन अगामी पुष २३ गते काठमाडौंमा हुने
ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस बिजयी, चिरीबाबु मेयर र गीता सत्याल उपमेयर बने
लाइसेन्स लिन उमेर हद तोकिने, चालकलाई ड्रेस कोड अनिवार्य
भारतीय राजदूत दिल्ली पुग्दा रअ प्रमुख सुटुक्क नेपालमा, दोस्रो तहका नेतासँग गोप्य भेटघाट
सुखी र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसरको आरम्भ – प्रधानमन्त्री
निर्घात कुटपिट र कालो मोसोपछि एक दम्पतिलाई गाउँ निकाला, यसरी भयो घटना
प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकअर्काको पर्याय हो- कोइराला
भारतीय राजदूतलाई साक्षी राखेर राजपाको नयाँ पार्टी कार्यालय उद्घाटन
एक महिनाभित्रै काठमाडौं झलमल्ल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटार छाडे, खोजीकार्य भएन
मुख्यमन्त्रीकी दाबेदार अष्टलक्ष्मी भन्छिन ‘निर्वाचन भए पनि जित पक्का छ ’
संसद बिघटन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड